Abagxeki bakaGreta Thunberg ngabagwebi abangafanelekanga ukuba ngabasetyhini ': isiphelo sesizathu: UMartin Vrijland
Ibali le-Greta Thunberg liba licace kwaye licace gca indlela yokuphelisa naluphi na uhlobo lokugxekwa kwisiseko sesizathu, kodwa kwisiseko seemvakalelo zesisu. Kule mpelaveki ndibeke umyalezo kwiphepha lam labucala le-Facebook kwaye ndaxelelwa ukuba ukuthumela kwam kungaphaya kwemida yokuziphatha eyamkelekileyo. Le yayiyinxalenye nje yokuphendula, endiyifumene ngokukhawuleza kunomntu owayenokubukela ividiyo endiyithumele konke. Le vidiyo yenziwe nguDavid Icke, apho acacisa ngokuchanekileyo ukuba amanani emozulu abonakala ngathi aphathisiwe, ngokucacileyo bekungafanelekanga ukuba uyibukele. Yiyo kanye le mpembelelo uGrta Thunberg ekubonakala ukuba usetyenzisiwe. Umyalezo osisiseko ngu "Asisenalo ixesha lengxoxo kwaye abagxeki basabela ngendlela engafanelekanga ngokwesini kubantu abagwenxa kubantwana'
Isicatshulwa endisibeka kunye nevidiyo ye-Icke sikwanxulumene noDavid ngokwakhe, kwaye konke kubonakala kuyinxalenye yesicwangciso sokungayiva kakuhle into yokugxekwa, kodwa ukuyitshisa 'njengelungile' kwaye 'kuyingozi', ngaphandle kokufumana umxholo konke konke ukumamela. "Isizathu" kunye "nokugxekwa okuqinisekileyo" kufakwe kuqhina kuthiwe "akulunganga kwezopolitiko" kwaye "kuyingozi." Ayisenakuba malunga nesizathu kunye nesizathu. Ukususela ngoku kuye konke malunga 'mamela into oyixelelweyo'nolutsha olusongelwe ngokupheliswa ngokufudumala komhlaba, lubeka ikhosi ukusukela ngoku. Apha ngezantsi sisicatshulwa endisibeka kunye nevidiyo kaDavid Icke:
Uya kukhokelwa yi-hoax yokutshintsha kwemozulu. Kodwa ngokuqinisekileyo akufuneki ukuba uyimamele, kuba inomdla (isiNgesi esi: eyakhiwe ngononophelo 'njengegama') ukunxulunyaniswa 'nephiko lasekunene lokuphikisana' nelinokugxekwa ngokusilela kweBrexit kunye nelahleko yezoqoqosho ngenxa yeemfazwe zorhwebo. ; abantu abakholelwa ukuba izilwanyana ezirhubuluzayo zilawula umhlaba. Ukuxoka ngobuxoki kutshisiwe kwinto ethile engumsebenzi we-idiots epheleleyo, ngoko asisayiphulaphuli loo nto.
I-PsyOp yokufudumeza kwehlabathi ijikeleza ekuqalisweni kolawulo lwehlabathi kunye nolawulo lwento nganye yobomi bakho ngokudala ingxaki yehlabathi ukuze samkele isisombululo ebesingasoze samkele. Eyona nto kugxilwe kuyo zizezona ntsapho zincinci, kuba abanalo ulwazi ngeendlela zokusasaza (njengabadala abaninzi, ngendlela).
I-skeptics malunga 'nokufudumala kwehlabathi' zidibene noDonald Trump noBoris Johnson. Ukuba ke uvumela uqoqosho luqhawuke kwaye ubeke ezo zihlangu zezi mpawu zinamaphiko, uye wajongana nokuthandabuza kwi1x. Ngokudibanisa 'ukugxekwa' kwimpawu eyakhiwe ngononophelo ngasekunene (anti-globalists, anti -imozulu yokutshintsha, abezomhlaba, ngobufazi kunye nethiyori yezorhwebo) unokwenza wonke umntu abe nomsindo ngale brand yephiko lasekunene ukuba wenza uqoqosho luphole. Le yeyona ndlela ilula kwaye isebenzayo yokwaphula ukugxekwa kwixesha elide. Kungenxa yoyilo.
Isizathu sokuba sijongane ne-pawns yeqela eliphikisayo elilawulayo elitsala umdla omkhulu kuba iye yachukunyiswa kukuqwalaselwa ngokubanzi kwemithombo yeendaba (njengoDavid Icke, uAlex Jones nabanye abaninzi) kungenxa yokuba ezi pawns bezifanele ukudityaniswa naloo nto. phawula "ekunene" ("iphiko lasekunene" ngesiNgesi). Kwaye ngoku sifikelele kwinqanaba lokuba olu hlobo lophawu kufuneka lutyiselwe 'ekunene' lube yingozi. Zonke iindlela zokuxoxa azisasebenzi: "abagxeki bayingozi". Leyo yinkqubo esingqina ngayo ngoku, kunye no-Greta Thunberg kwindima ekhokelayo.
Isisihlazo sesini- kunye nokungabinantlonelo kwabantwana senziwa senziwa ngumbhali ochasayo uRobert Jensen, othi kwividiyo engezantsi angathanda ukuphosa uGreta ngeenxa zonke entloko. Ngaba ucinga ukuba lo mvukeli uthi konke kusenzeka ngokuzenzekelayo? Hayi, unamathela kwiskripthi esenziwe kakuhle kwaye sizimisele ngononophelo.
Indima yazo zonke ii-pawns ezichaseneyo eziphikisayo ukusuka e-Icke ukuya eJensen kukuba banokuthi bavakalise inyani eninzi. Ngoku sifikelele kwinqanaba elicwangcisiweyo lokuba loo nyaniso ayisokuphinda ibaluleke. U-Greta Thunberg uza kujongana nale nto sele inobungozi beentlobo zeenkawu ezine-testosterone eninzi. Isiphelo esiqinisekileyo sendoda njengendidi siyabonakala. UDonald Trump noBoris Johnson bavunyelwe ukuba benze lo mbhalo kwibala lezopolitiko liphela kwiilensi zeekhamera ezisasazayo. Esi sisiphumo sombhalo owenziwe ngononophelo ngasekunene ('wing-wing' ngesiNgesi): inyani inxulunyaniswa ne-brand ngasekunene kwaye ke ngoko iphonswa kwiqula lokuntywila.
Indoda ihlala ilusu elincinci okanye ingenabuhlobo kubafazi (bona imicimbi ngexilongo en Johnson), bakholelwa kwi iyelenqe, ngabazwelonke kunye "nelizwe labo kuqala" ngabakhuseli. Zichasene ne-globalists kwaye azikholelwa kubushushu behlabathi obenziwe ngabantu. Zingunobangela wayo yonke imbandezelo yoqoqosho kuba kufuneka zibucayi kwaye zilukhuni ngobudoda ukuba kunyanzelekile. Ukugxeka nokuthandabuza yinto yeentlobo eziyingozi ebizwa ngokuba 'yindoda'. Akusekho mfuneko yokuba simamele oko kwixesha elizayo. Siza kuqala 'ngokuhlazisa ngehlazo'. Ukususela ngoku onke la madoda aza kufumana i-Greta Thunberg gif (jonga ifoto enenqaku) ethi: “Unjani wena!"
Isiphelo sentetho sisebusweni. Sibona iphulo eliphuhliswe ngobunono kwihlabathi liphela, apho uphawu ngasekunene luye lwavunyelwa ukuba lufumane amandla kwezopolitiko kwaye lukhokele, kwaye ekugqibeleni lube nokugqitywa. Oko kuyicacisa ngokupheleleyo indlela yokufikelela esiphelweni ngurhulumente wehlabathi, apho abagxeki bengasayi kuphinda beviwe kwakhona kwaye banyamalale besiya gulag.
Uludwe lwekhonkco lovimba: trouw.nl, khawngs.com, smh.com.au
URobert Jensen kunye ne-Arnold Karskens 'ebomvu yeendaba zeNOS zeendaba ezichasayo zibonisa: ingadi ayikho kuwo
UPopu uFrancis ubiza iinkokheli zehlabathi kwiVietnam kwi14 ngoMeyi 2020 ngepact yomhlaba
tags: 17, Boris, abagxeki, Donal, eziziimbalasane, jikelele, Greta Thunberg, ubuxoki obenziwe ngamasibomu, Jensen, Johnson, kugxekwa, i-potcast, psyop, Robert, iskram, abagxeki, ngexilongo, ukufudumala
30 Septemba 2019 kwi-11: 16
Kuthetha ukuthini ukuba wenza izinto ngokweemvakalelo, kulungile?
Akukho nto igwenxa ukuba ubonakalisa uvakalelo kwizinto, utsho uMsasazi osasaza ubushushu emhlabeni
I-Ex ED Greenpeace yeHlabathi
30 Septemba 2019 kwi-11: 34
Jonga eli nqaku ngokunyaniseka nesihloko esithi: "Ukungaqiniseki kwesimo sezulu kuhamba kunye nentiyo yabasetyhini"
30 Septemba 2019 kwi-14: 53
kufuneka ubanike, bayakhile ngobuchule ngezigaba. Yonke into ihamba ngokweskripthi ...
30 Septemba 2019 kwi-18: 51
idd yonke yenzekile ngokwendlela yeDelphi
I-Delphi (ne) yeTekhnoloji ”yokulawula abemi besiya kwicala lokudibana esele ligqibe isigqibo. Ubuninzi buza kubandakanya inkqubo ethile entsha okanye indlela urhulumente afuna ukuya kuyo, kodwa ifuna ukuba abemi bathenge ngaphakathi. Obu buchule benzelwa ukuba bunyhashe phantsi kwaye kuvale amazwi aphikisayo, ihlala ishiya amaqela aphikisayo kwaye ephakamisa ukuba abachasi abakhohlakeleyo, abanamfesane, okanye bazizidenge nje. Oorhulumente beengingqi badla ngokuqesha inkampani yokubonisana enabasebenzi abaqeqeshelwe obu buchule okanye ifika kwisigqibo esele sifikelwe ngurhulumente ngendlela enokwenza ukuba abemi baqale ukucinga ukuba yayingezongcinga zabo, hayi ezorhulumente.
1 Oktobha 2019 kwi-10: 00
Jonga izimpendulo ze-21
Kwiintsuku ze-3 ezedlulileyo
Akukho ngxoxo icocekileyo malunga 'nokufudumala kwehlabathi' inokwenzeka NGOKUQHELE UKUQALA ukuthetha nge-UZIMA KWI-ROOM eyi-GEENGINEERING. AYIKHO ukufudumala kwehlabathi, KUQHUBEKILEYO KUQHUTYELWA. Ukusuka kubushushu be-ionospheric, i-stratospheric aerosols (chemtrails), ii-laser zetillion, i-bunker ipetroli evela kwiinqanawa ... njl njl., Imozulu yenziwa kwaye ayisasebenzi. yinyaniso leyo.
« Isicatshulwa esiya kwiNtetho (i-TTS) kunye neehologramu ezinjengempilo eneMicrosoft Hololens 2
Ibala 'lokuchasana nemozulu' linxulunyaniswa nethiyori zenqanawa, ipolitiki yephiko lasekunene kunye neemvakalelo zesisu »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.084.307